Inkomba Isikhathi Inkomba MT4 - ForexMT4Indicators.com
Ikhaya Izinkomba ze-Forex MT4 Inkomba Isikhathi Inkomba MT4
Inkomba Isikhathi Inkomba MT4
Okthoba 19, 2021
Isingeniso ku-Bar Timer Indicator
1 Isingeniso ku-Bar Timer Indicator
2 Siyini inkomba ye-Bar Timer?
3 Isebenza kanjani inkomba ye-Bar Timer?
4 Indlela yokusebenzisa i-Bar Timer Indicator
Abathengisi abaningi abanolwazi bayazi ukuthi intengo yokuvala ikhandlela imvamisa ibalulekile. Lokhu kubatshela ngokuziphatha kwemakethe nokuqondiswa okungaba khona kwentengo. Empeleni, abathengisi abaningi abanolwazi bakholelwa ukuthi ukuhweba ngenkathi ikhandlela lingakavalwa akuyona into enhle.
I-Bar Timer Indicator iyithuluzi elivumela abadayisi ukuba benze umkhuba wokuhweba kuphela lapho ikhandlela selizovala noma uma selivaliwe empeleni.
Siyini inkomba ye-Bar Timer?
I-Bar Timer Indicator iyinkomba ekhombisa ukuthi sekusele isikhathi esingakanani ngaphambi kokuthi ikhandlela lesikhathi samanje livalwe. Noma kunjalo, esikhundleni sokubonisa isikhathi, ikhombisa isikhathi esisele kwifomu lephesenti. Ukusondela kwesibalo sephesenti kuya 100%, isikhathi sokuvala ikhandlela. Iphinde ibonise ibha evundlile eyenziwe ngamachashazi lapho umugqa oqondile ugijimela ngakwesokudla njengoba isikhathi sokuvala sekhandlela sisondela 100%
Isebenza kanjani inkomba ye-Bar Timer?
I-Bar Timer Indicator isebenza ngokusebenzisa okuphakelayo kwesikhathi kusuka kuseva yomthengisi. Bese iqhathanisa isikhathi samanje nesikhathi esisele sokuthi ikhandlela livalwe ngokuya ngesikhathi esisetshenzisiwe. Lokhu-ke kuguqulwa kube yipesenti futhi kuboniswa eshadini.
Indlela yokusebenzisa i-Bar Timer Indicator
I-Bar Timer Indicator inezinketho eziningana ngaphansi kwethebhu "Okufakwayo" ngaphakathi kwezilungiselelo zayo. Lezi zinketho ikakhulukazi zenzelwe ukuguqulwa kokubukwa kuphela.
"I-FontName" ivumela abasebenzisi ukuthi bashintshe uhlobo lwefonti esetshenziselwa ukubonisa isibalo samaphesenti.
"I-FontSize" iguqula usayizi wefonti esetshenziselwe inani lamaphesenti elibonisiwe.
"I-FontColor" ivumela abasebenzisi ukuthi bashintshe umbala osetshenziswe yinkomba. Lokhu kusethwe kusengaphambili kumhlophe ngakho-ke abasebenzisi abathengisa eshadini lentengo elinesizinda esimhlophe kufanele bashintshe umbala ukuze benze inkomba ibonakale.
"I-Corner" ivumela abasebenzisi ukuthi basuse isibonisi se-Bar Timer kumakhona ahlukene kushadi lentengo. Okulandelayo izinombolo ezahlukahlukene ezimele ikhona ngalinye.
I- “XDistance” iguqula ibanga iBar Timer ekhonjiswa emaphethelweni eshadi eceleni kwe-x-axis.
Ngokwesinye isandla, I- “YDistance” iguqula ibanga iBar Timer eliboniswa kusuka phezulu noma ezansi kweshadi lentengo eceleni kwe-y-axis.
I-Bar Timer Indicator ayilona uhlobo lwenkomba enikeza izinkomba zobuchwepheshe ezenzekayo ekusethweni kwezohwebo. Akunikezeli izinkomba zomkhuba noma umfutho, noma amasignali alo okungenzeka abuyele emuva. Ayinikezi izinkomba zokuthenga ngokweqile nokuthekelwa ngokweqile kanye nesiginali yayo ehambelana nencazelo yokuguqula. Futhi ayinikeli ngamazinga wokusekelwa noma wokumelana lapho abathengisi bangalindela ukubuyela emuva.
Okwenzayo kumane kunikeze inkomba ebonakalayo yokuthi kushiywe isikhathi esingakanani ngaphambi kokuthi kuvalwe ikhandlela. Lokhu kungahle kungabonakali kuwusizo kubahwebi abaningi. Noma kunjalo, kukhona nabadayisi abaningi amasu abo asebenza kahle kakhulu lapho kuthengiswa noma kusondele ukuvalwa kwekhandlela. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi kumasu asebenzisa amaphethini wezibani. Futhi kuyinhlanganisela enhle yezinkomba zesiginali yokuhweba ezinokuthambekela kokupenda kabusha. Ukuhweba eduze nokuvalwa kwekhandlela kuzonciphisa amathuba okuthi iphethini lamakhandlela lizoshintsha noma isiginali yezohwebo izophinde ipende.
Ibha Isikhathi Inkomba MT4 kuyinto Metatrader 4 (MT4) inkomba kanye nengqikithi yale nkomba yezobuchwepheshe ukuguqula idatha yomlando onqwabelene.
Ibha Isikhathi Inkomba MT4 inikeza ithuba ukuthola izici ezihlukahlukene futhi amaphethini intengo Dynamics ezingasaziwa ezingabonakali ngeso lenyama..
Indlela yokufaka i-Bar Timer Indicator ye-MT4.mq4?
Landa i-Bar Timer Indicator ye-MT4.mq4
Kopisha i-Bar Timer Indicator ye-MT4.mq4 ku-Directory yakho ye-Metatrader / ochwepheshe / izinkomba /
Qhafaza kwesokudla ku-Bar Timer Indicator ye-MT4.mq4
Inkomba Ibha Isikhathi Inkomba MT4.mq4 iyatholakala kwi Ishadi yakho
Indlela ukususa Bar Isikhathi Inkomba MT4.mq4 kusukela Metatrader yakho Ishadi?
Inkomba Isikhathi Inkomba MT4 (U-downloader mahhala)
Isiqephu esedluleROC nge Signal MA MT5 Inkomba
Isihloko esilandelayoUltimate Oscillator MT5 Inkomba
Inkomba Yokuhweba Yezinga le-MT4